Qalabka nooca software ah ayaa ku haboon My Amazon Search Engine Optimization sida ugu fiican ee suurtogalka ah?
Ka hor inta aanad ahayn, waxa ugu adag ee Amazon waa in aad u baahan tahay inaad fahamto baahida dhabta ah, dalabaadka iyo ujeedooyinka macaamiishaada iman kara si ay si tartiib tartiib ah ugu beddelaan iibsadaha dhabta ah ee iibsashada soo noqnoqonaya adiga iyo cid kale. Hase yeeshee, ma ahan hawl fudud oo dhan, sababtoo ah ganacsadeyaal kasta oo online ah iyo xitaa waqti badan oo iibiye ah oo ku yaala Amazon horayba u haystaa alaab aad u badan oo la sameeyo iyo arrimo badan oo muhiim ah oo hadda la xalliyo marka hore iyo ugu horreyn. Laakiin nasiib wanaag waxaa jira qalab aad u wanaagsan oo laga heli karo suuqa si aad u hesho caawinaad Amazon Search Engine Optimization. Laakiin ka hor inta aanad ku tusin qaybo qalabyada gaarka ah iyo qaababka internetka ee waxtarka leh, bal aynu wajahno - Amazon Search Engine Optimization inta badan waxay ku soo laabanayaan keywords keywords bartilmaameedka, sidoo kale sida meelaynta saxda ah iyada oo loo marayo qeybaha hoose ee liiskaaga wax soo saarka. Taasi waa sababta aan hoosta ku socdo si aan ugu fiirsado Amazon Search Engine Optimization loogu talagalay ereyada muhiimka ah iyo jumlado raadin dheer-dheer, oo lagu taageeray dhowr ka mid ah aalado wanaagsan oo wanaagsan si wax waliba u sahlan (ugu yaraan kuwa la xiriira cilmi-baaris ku dhisan oo qoto dheer - si dhab ah, waxaa loo maareyn karaa si sahlan oo sahlan - dabcan, marka la eego in lagu kaalmeeyo caawiyaha internetka ee saxda ah).
Amazon Search Engine Optimization for Keywords
1. Ereyada Ganacsi ah - waxay ka mid yihiin qalabyada Amazon Search Engine Optimisation, gaar ahaan marka ay timaaddo cilmi-baarista muhiimka ah ee ugu muhiimsan oo lagu beegsanayo heer sare oo tartan ah iyo suuragal ah in lagu guulaysto raadinta dheeraadka ah ee raadinta dheer. Oo runtii way fududahay in la soo saaro tons oo ah erayo macno leh oo muhiim u ah qaybtaada sheygaaga ama shey gaar ah oo aad ku iibisay halkaa. Waxay micnaheedu tahay in Ganacsatada Ganacsatada ah ay noqon karaan xalka ugu fiican ee kuwa iibka ah ee iibsaday kuwaas oo u baahan dhibcaha saxda ah ee leh Amazon Search Engine Optimization for keywords keywords.
2. Keyword Dominator - waa qalab kale oo aad u isticmaali karto istaraatiijiyadaada guud ee Amazon Search Engine Optimization. Inkasta oo marin-u-helka qalabkaan oo dhan lagu soo dallacayo qiyaastii 50 doollar, in ka badan shan iyo toban kun oo ka mid ah isticmaalayaasha taagan ayaa mar hore soo celiyay faa'idooyinka kala duwan ee faa'iidooyinka gaarka ah. Qaar ka mid ah kuwa kale, aaladda Keyword Dominator waxay leedahay saddex qalab oo kala duwan oo u adeegi kara hab iyaga u gaar ah. Kaliya isku day inaad hesho Google Autocomplete Keyword Tool (khaas bilaash ah oo si gaar ah loogu talagalay in lagu garto dhammaan isku-dhafka muhiimka ah ee ku xiran qaybta niche / sheygaaga - si toos ah uga soo qaada SERPs Google), Qalabka Keyword YouTube (wuxuu bixinayaa fikrado muhiim ah mudo dheer taasi waxay noqon doontaa mid aad u caawisa ganacsadaha kuwan oo burburinaya muuqaal taageere ama suuq geynaya bogga labaad ee booqda bogga labaad ee adduunka), iyo sidoo kale Amazon Keyword Tool (wuxuu ku siinayaa fursad toos ah oo loo marin karo keydka keyword keyword kaas oo ka hadlaya malaayiin baaritaanada firfircoon ee la codsaday kuwa dukaameeysan oo sameeya maalin kasta iibsashada suuqa Amazon online) Source .